गर्भावस्थामा स’म्पर्क गर्न हुन्छ ? – Jagaran Nepal
गर्भावस्थामा स’म्पर्क गर्न हुन्छ ?
काठमाडौं । अधिकांश दम्पत्ति गर्भावस्थामा सहवास गर्न हुने वा नहुने विषयले चिन्तित् रहने गर्छन् । गर्भावस्थामा सहवास राख्दा शिशु र महिला दुवैलाई नकारात्मक असर गर्ने बुझाइ आम दम्पत्तिमा पाइन्छ । यसलाई स्वभाविक चिन्ता पनि मान्छि । गर्भावस्थामा राख्दा पाठेघर खु’म्चिनेदेखि शिशुलाई छोपेर राखेको झिल्ली च्या’ति’एर सं’क्र’मण हुनेसम्मको तर्क हुने गर्छ ।
स्वस्थ गर्भावस्थामा यौ’ ‘नस’म्प’र्क राख्न सकिन्छ । स्वस्थ गर्भावस्थामा हुने स’म्प’र्कले महिला तथा ग’र्भमा रहेको शिशुमा न’कारात्मक अ’सर नगर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
गर्भवती महिलाले इच्छा गरेमा वा उनलाई कुनै असजिलो महसुस नभएमा यौ’ ‘न स’म्प’र्क राख्न अफ्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । तर, यसबेला पुरुषले यौ’ ‘न सम्पर्कका लागि द’बा’ब दिनु भने हुँदैन ।
स’म्प’र्कले द’म्पत्तिबीचको स’म्ब’न्धलाई प्रगाढ बनाउने गर्छ । तर, ग’र्भाव’स्थामा यौ’ ‘न स’म्प’र्क नहुँदा स’म्ब’न्धमा बि’ग्रि’ने डरमा महिलाहरु रहेका देखिन्छन् । गर्भवती अवस्थामा पनि कुनै न कुनै रुपमा दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न असल सञ्चारको आवश्यकता पर्ने गर्छ ।
यसका लागि ग’र्भावस्थामा पनि यौ’ ‘न क्रि’याक’लाप आवश्यक पर्छ । तर, यसका लागि ग’र्भ रहेको कति महिना भयो भन्नेले अर्थ राख्ने गर्छ । ग’र्भ रहेको महिनाको आधारमा यौ’ ‘न आसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोहीअनुसारको सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ । स’म्प’र्कपछि र’क्तश्रा’व, पे’ट दु’खेमा, अ’सह’ज म’हसुस भएमा, यो’ ‘नीबाट पा’नी ब’गे’मा स’म्प’र्क त’त्काल ब’न्द गर्नुपर्छ ।
स्वस्थ ग’र्भावस्थमा स’म्प’र्क राख्दा ग’र्भको शिशुलाई असर नगर्ने चिकित्सकहरुले बताउने गरेका छन् । उनीहरुकाअनुसार भ्रु’णको थै’ली र ग’र्भा’श’यका मां’शपे’शीले ग’र्भको शिशुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले स’म्पर्क’का कारण ग’र्भको बच्चामा असर गर्दैन ।
यो बेला उत्सर्जन हुने अ’क्सि’टो’सिन ह’र्मो’नका कारण पति पत्नीबीचको सम्बन्ध आत्मीय तथा प्रेमपूर्ण बन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । ग’र्भाव’स्थामा हुने स’म्पर्कले महिलालाई चि’न्तामुक्त गराउने र प’र्याप्तमा’त्रा नि’द्रा पर्ने र र’क्तचा’प सन्तुलित गर्न सहयोग गर्छ ।
ग’र्भावस्थामा बे’ ‘होस हुने समस्याबाट पीडित गर्भवती महिलालाई यस समयमा हुने स’म्प’र्क लाभदायक बन्न सक्छ । यस समस्याबाट पीडित महिलाहरुका लागि पुरुषको वी’ ‘र्यमा हुने प्रो’टि’न’ले फाइदा गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । उनीहरुकाअनुसार वी”र्र्य ले महिलामा विशेष एन्टीबडी उत्पादन गरी ग’र्भाव’स्थामा बे’हो’स हुने समस्या कम गर्छ ।
ग’र्भमा रहेको बच्चालाई असर नगर्ने गरी पेटलाई द’बाब सृजना नहुने गरी स’म्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उचित आ’सन चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, ग’र्भ रहेको सुरुको तीन महिना र अन्तिमको एक महिना स’म्पर्क नराख्दा नै राम्रो हुन्छ । अन्य सामान्य अवस्थामा वा गर्भवती महिलामा कुनै असहज अवस्था नरहेको खण्डमा स’म्प’र्क गर्न सकिन्छ ।